Homeसमाचारआंचल शर्मा भन्छिन्: ‘रियल हिरो पल शाह नै हो, उँहालाइ राजेश हमालसंग तुलना गर्न मिल्दैन’ (भिडियो)
June 20, 2021 admin समाचार 1906
नायीका आँचल शर्माको वास्त’विक दवाडी हो । तर पनि उनी शर्मा थरवाट चर्चित छन् । उनले एक वर्ष अघि डा उदिप श्रेष्ठसंग विवाह गरेकी छन् । उनको विवाहको सम’यमा निकै चर्चा भयो । उनले लगाएको लुगा र गहनाको चर्चा भयो भने हेलिकप्टर लिएर रिसेप्सनमा आएको कुराले पनि निकै च’र्चा पायो ।
आँचल शर्मा र उनका साथी पल शाहको बारेमा आँचलको विवाह अघि उनीहरुको सम्ब’न्धलाई लिएर चर्चा गरिन्थ्यो । पल र आँचलको प्रेम रहेको र आँचलले पललाई धो’का दिएर उदिपसंग विवाह गरेको सम्मका चर्चा सामाजिक सञ्जालमा भए । तर अहिले ति चर्चा विस्तारै सेलाउँदै गएको छ । एउटै फिल्मवाट काम सुरु गरेका उनीहरुले एक सय भन्दा बढी म्युजि’क भिडियो छन् ।
अहिले आँचल फेरी च’र्चामा छन् । उनी १० दिनको विपश्यता ध्यानमा गएर फर्केर आएपछि सामाजिक काममा निकै स’क्रिय छन् । उनको ब्यवहार र बोल्ने, सोँच्ने शैली पनि प’रिवर्तन भएको छ । उनले निकै भावुक र दार्श’निक कुरा गर्न थालेकी छन् ।
आफुहरुको सम्ब’न्ध फरक भएका कारण दुई जनाको फरक फरक ब्यक्तिसंग विवाह भए पनि आँप नाम र जोडी भने संधै रहने उनले बता’एकी छन् । धेरै फिल्ममा पलसंग खेलेका का’रण दर्शकले मन पराएर ब’नाइदिनु भएको आँप जोडी संधै रहन्छ, उनले भनिन् यो नामले इतिहास बनाउन सक्छ । तर प्रष्ट हुनुस् हाम्रो प्रे’म भने होइन । पलसंगै नाई नभन्नु ल ४ वाट फिल्म खेल्न सुरु गरेकी आँचलले डा उदिप श्रेष्ठसंग विवा’ह गरेकी छन् ।
यसै क्रममा नायिका आँचल शर्मा र उनका टिमले बिहिबार सिन्धुपाल्चोक पुगेर सहयो’ग वितरण गरेको छ । नायिका आँचलको साथमा निर्देशक मिलन चाम्स, बसन्त निरौला, कलाकार रितेश चाम्स, ओएसआर डिजिटलका प्रमुख ओम अग्रवाल लगायतको टिमले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको बाढीबाट वि’स्थापित भएका परिवारलाई खाद्यन्न वितरण गरेको हो ।
सिन्धुपाल्चोक पुगेर फर्कि’एपछि नायिका आँचल शर्माले त्यहाँको परिस्थिती कहा’लीलाग्दो रहेको उल्लेख गरेकी छिन् । उनले, सबैको सपना मेलम्चीले बगाएर लगेको भन्दै सबै नेपालीहरु एक’जुट भएर सिन्धुपाल्चोकबासीका बगेका सपनालाई पूल बनेर पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने बता’एकी छिन् ।
उनले, यो अव’स्थामा जसले जसरी सकिन्छ, त्यसरी नै सहयोग गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । मेलम्चीमा बाढीले वित’ण्डा मच्चाएर सयौ मानिसहरुलाई विस्थापित गरेपछि कलाकारहरुले पनि सहयोग वितरणलाई तिव्र’ता दिएका छन् ।
नायिका आँचल शर्माले चलचित्र ‘नाई नभन्नु ल ४’बाट चलचित्र क्षेत्रको यात्रा तय गरेकी हुन् । यो चलचित्रमा नायिका वर्षा राउत पनि मुख्य नायि’काको रुपमा थिइन् । चलचित्र हिट भएपनि यसको सम्पूर्ण जस आँचललाई गएन । यसपछि, आँचलले सोलो नायि’काको रुपमा ‘ब्ल्याक, जोनी जेन्टलम्यान’ लगायतका चलचित्रमा काम गरिन् । यी दुबै चलचित्र बक्स अ’फिसमा सुपर फ्लप भए ।
आँचलले समुहमा काम गरेको चलचित्र ‘शत्रु गते, दाल भात तरकारी’ बक्स अफि’समा हिट भएपनि यसको जस उनलाई गएन । आँचलले सोलो नायिकाको रुपमा काम गरेको चलचित्र बक्स अफि’समा सुपर फ्लप हुँदा उनले समुहमा काम गरेको चलचित्र भने हिट भएको छ । यसैले, पनि आँचलले हिट चल’चित्रको जस आफूले लिन पाएकी छैनन् ।
नायिका आँचल शर्मा आफ्नो बोलीका कारण बारम्बा’र चर्चामा आउँछिन् । आँचलले अन्त’रवार्ता दिने क्रममा बोलेको कैयो बिषयहरु सामाजिक संजालमा अहिले पनि भाइरल छन् । तर, बिहेपश्चात भने उनी बारम्बार ट्रोलको शिकार भैरहेकी छिन् । बिहेको पार्टीमा लगा’एको १६ लाखको लेहेंगा होस् या हालै मात्र पब्जी र टिकटकको बिषयमा बोलेको कुराले नै किन नहोस्, आँचल ट्रो’लको शिकार भइन् ।
हुनत, आँचललाई यस्ता ट्रो’लमा आउने प्रतिक्रियाले हैरान बनाउँछन् । तर, यसलाई वे’वास्ता गर्दै अगाडि बढ्नु अहिलेको समयमा सेलिब्रिटीका लागि सहज भने छैन । अर्कोतिर, आँचल शर्माको बिष’यमा विभिन्न खालका चर्चा गर्न चलचित्र क्षेत्र भित्रकै चलचित्रकर्मी पनि पछाडि छैनन् । यो कुरा आँचललाई पनि रा’म्रोसँग थाहा छ । इताजा खबरबाट
मुलुकभर ७ हजार ३६८ जना नयाँ कोरोना सं’क्रमित थपिए, १४५ को मृ’त्यु
May 16, 2021 admin समाचार 2356
नेपालमा पछिल्लो समय दिनप्रति दिन को’रोना संक्रमि’तहरू तीब्र रुपमा बढिरहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रा’लयका अनुसार मुलुकभर प’छिल्लो २४ घण्टामा ७ हजार ३६८ जना नयाँ कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् । त्यस्तै, पछिल्लो २४
प्रधानमन्त्रीको आ’पत्ति : शेरबहादुर देउवा जी ले राष्ट्रपतिलाई ‘तिमी,’ ‘उनी,’ ‘गरिन्’ भन्ने ?
May 23, 2021 admin समाचार 1995
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कां’ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउ’वालाई असभ्य र संस्कारहीन भएको त्यस्तो भाषाप्रति आपत्ति जनाउनु’भएको छ । शनिबार बालुवाटारमा आ’योजित पुस्तक विमोचन कार्य’क्रममा सभापति देउवाद्वारा जारी वक्तव्यमा राष्ट्रपतिलाई तिमी, उनी’जस्ता असभ्य भाषा बोलेको
October 4, 2020 admin समाचार 8883
परम्प’रानुसार मलमासको अव’धिमा शुभ कार्य गर्न नहुने धर्मशास्त्रका विज्ञले बताएका छन् । बि’हीबार अपरान्ह ४ः५९ बजेदेखि शुरु भएको मलमास असोज ३० गते राति १ः५३ बजेसम्म रहनेछ । सो अवधिमा कुनै पनि नयाँ कार्य’को थालनी गर्न
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (205450)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (196815)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (196312)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (196158)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (194621)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (194311)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (192532)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (192134)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (184938)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (161614)